कीर्तिपुरवासीको चिन्ता : न जग्गा न त पैसा, कसरी बनाउने नयाँघर ? - Nepal News - Latest News from Nepal
कीर्तिपुरवासीको चिन्ता : न जग्गा न त पैसा, कसरी बनाउने नयाँघर ?
काठमाडौं, वैशाख २०– वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प आएका बेला कीर्तिपुर नगरपालिका–१४ कि रुकु महर्जन घरनजिकै खुर्सानी सार्दै थिइन् । उनका दुई बच्चा घरमै थिए । ‘भूकम्पबाट बच्न स्कुलमा सिकाएको रहेछ, त्यसैले उनीहरू भागेर बाँच्न सफल भए,’ रुकु महर्जनले भनिन् ।
उनको घर ध्वस्त भएको छ । एक सातापछि रुकु खण्डहर घर खोस्रँदै थिइन् । ‘सबै सामान छोपिएको छ, निकाल्नु प¥यो नि,’ उनले भनिन् ।
कीर्तिपुरमा प्रशस्त जग्गा नभएकाले रुकुको परिवार पुरानो भग्नावशेष हटाएर त्यसै ठाउँमा नयाँ घरको जग राख्ने निर्णय गरेका छन् । ‘आम्दानी खासै छैन, श्रीमान् फर्मा मिस्त्रीको काम गर्नुहुन्छ,’ रुकुले भनिन्, ‘अब यही ठाउँमा घर बनाउने भनेको हो, खै कसरी बनाउने ?’ रुकुका पाँच बालबच्चा छन् । सातजनाको परिवार पालिनु र ओत्ने ठाउँ तयार गर्नु रुकुको परिवारका लागि अबको दिनमा ठूलो चुनौती बनेर खडा भएको छ ।
रुकुको घरसँगै ३५ घरसहित तल्लो गुठ भूकम्पले सखाप पारेको छ । भूकम्पले तल्लो गुठका ११ जनाको ज्यान लियो । घाइते २३ जनाको स्टार हस्पिटल र पाटन हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ ।
तल्लो गुठबाट केही मिनेट उकालो लागेसँगै माथिल्लो गुठ पुगिन्छ । तल्लोजस्तै माथिल्लो गुठमा पनि करिब ३५ घर सखाप भए । ‘त्यसै दिन नौजनाको शव निकाल्यौँ,’ माथिल्लो गुठका अशोक महर्जनले भने ।
अशोक पनि आफ्नो घरमा पुरिएका थाल, कचौरा निकाल्दै थिए । भूकम्प आएकै साँझ उनले आफ्नो घरबाट हजुरआमाको शव निकालेका थिए । ‘भूकम्प आउँदा उहाँ भ¥याङ उक्लन थाल्नुभएको रहेछ, त्यति बेला नै घर ढलेर किचिहाल्यो,’ उनले भने । ८५ वर्षीया हजुरआमा गुमाएको पीडा एकातिर छँदै छ । तर, अबको बाँकी जीवन कसरी बिताउने भन्ने चिन्ताले पनि अशोकको परिवारलाई सताएको छ ।
‘पैसा छैन, जग्गा पनि धेरै छैन । यस्तो बेला अब कसरी नयाँ घर बनाउने ?’ उनले भने ।
यहाँ भूकम्पले वृद्धवृद्धाको मात्र मृत्यु भएन, तीनदेखि ११ वर्षसम्मका तीन बालबच्चाको पनि ज्यान लियो । परिवारका सदस्यसहित वर्षौंदेखि ओत लाग्दै आएको घर गुमाउँदा कीर्तिपुर गुठका स्थानीय यतिबेला पीडामा छन् ।
गुठवासीलाई सहयोग गर्दै भीक्षुहरू
भूकम्प जाँदा गुठ नजिकै रहेको चोभारका भीक्षुहरू गुम्बामै थिए । ‘हेर्दाहेर्दै गुठ ध्वस्त भयो, त्यसैले सहयोग गर्न आएको,’ एक भीक्षुले भने । चोभार गुम्बाका करिब ३० भीक्षुहरू खण्डहरजस्तै बनेको माथिल्लो गुठमा पुरिएका घरायसी सामान निकाल्न सहयोग गर्दै थिए ।
‘यहाँका स्थानीयलाई दुःख परेकाले केही दिन सहयोग गर्छौं,’ भीक्षुणी छिरिङ छोटानले भनिन् ।
राहतमा जुट्दै स्थानीय, सरकारी टोली रित्तो हात पुग्यो
भूकम्पले क्षति पुर्याएको एक साता बित्दा पनि सरकारी टोली प्रभावकारी राहत लिएर नपुगेपछि कीर्तिपुर गुठका स्थानीय अगुवा आफ्नै पहलमा राहत बाँड्न तम्सिएका छन् । अगुवाले तल्लो गुठमा राहत केन्द्र खडा गरेका छन् । ‘चोभारको आनी गुम्बा, फ्लोरिडा कलेज र प्रहरी चौकीबाट पठाएको टेन्ट, नुन, तेल र चाउचाउ समानुपातिक रुपमा वितरण गर्दै छौँ,’ स्थानीय इन्द्रबहादुर महर्जनले भने ।
राहत वितरण चुस्त र पारदर्शी बनाउन भन्दै स्थानीयले भूकम्प प्रभावितको नाम संकलन गरेर राहत विरण गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सहरी विकासले केही थान टेन्ट र ब्लाङ्केट पठाए पनि अत्यावश्यक राहत सरकारले अझै पठाउन नसकेको इन्द्र महर्जनले बताए ।
स्थानीयहरू राहत जुटाउने र वितरण गर्ने कार्यमा तदारुकताका साथ अगाडि बढे पनि सरकारी टोली भने निरीक्षण गर्ने नाममा रित्तो हात कीर्तिपुर पुगेको थियो । क्षतिको निरीक्षण गर्न पुगेका महालेखा परीक्षण कार्यालयका उप–महालेखा परीक्षक मोहदत्त तिमल्सिनाले रातोपाटीसँग भने, ‘क्षतिको निरीक्षण गर्न आएका हौँ, राहत नपाएको गुनासो हामी माथिल्लो निकायसम्म पुयाउँछौँ ।’
भूकम्पबाट हालसम्म मर्नेको संख्या ७२५० नाघ्यो(अपडेट)